Wepamusoro 10 App Store Optimization Maturu Ekuvandudza Yako App Chinzvimbo Pane Akakurumbira App Mapuratifomu
Chishanu, April 2, 2021 Chishanu, April 2, 2021 Douglas Karr
Iine anopfuura mamirioni 2.87 emashandisirwo anowanikwa paGoogle Play Chitoro uye anopfuura mamirioni 1.96 ekushandisa anowanikwa paApple App Store, hatizowedzere kana tikati musika weapp urikuwedzera kuwanda. Zvine musoro, yako app haisi kukwikwidza neimwe app kubva kune waunokwikwidza mune imwechete niche asi nemaapplication kubva kumhiri kwemusika zvikamu uye niches. Kana iwe uchifunga, iwe unoda zvinhu zviviri kuti vashandisi vako vachengete maapplication ako - avo
Python: Chinyorwa A Google Autosuggest Kubvisa kweMitambo kune Yako Niche Tsvaga Keywords
Muvhuro, March 29, 2021 Muvhuro, March 29, 2021 Osman Sirin
Wese munhu anofarira Google Maitiro, asi zvinyoronyoro kana zvasvika kuLong Tail Keywords. Isu tese tinofarira yepamutemo google maitiro sevhisi yekuwana nzwisiso pane yekutsvaga maitiro. Zvisinei, zvinhu zviviri zvinodzivirira vazhinji kuti vasaishandise kuita basa rakasimba; Paunenge uchitsvaga kutsvaga niche keywords, hapana data rakaringana paGoogle Trends Kusava neAPI yepamutemo yekuita zvikumbiro kuGoogle maitiro: Kana isu toshandisa mamamojuru senge pytrends, saka isu tinofanirwa
Channable: Fudza Zvako Zvigadzirwa Kumutengo Kuenzanisa Webhusaiti, Inobatana, Nzvimbo dzeMisika, uye Ad Networks
Muvhuro, Mbudzi 23, 2020 Muvhuro, Mbudzi 23, 2020 Douglas Karr
Kusvikira vateereri kwavari ndeimwe yemikana mikuru yeiyi nzira yekutengesa yedhijitari. Kunyangwe iwe uri kutengesa chigadzirwa kana sevhisi, kutsikisa chinyorwa, kubatanidza podcast, kana kugovana vhidhiyo - kuisirwa izvo zvinhu uko kune vanobatanidzwa, vateereri vanokodzera vakakosha pakubudirira kwebhizinesi rako. Ndicho chikonzero nei papuratifomu yega yega iine mushandisi mushandisi uye muchina-unoverengwa interface. Tichitarisa kumashure kune rino gore, kukiya kwakachinja kushambadzira uye ecommerce